Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Sambo fitsangantsanganana roa miantso an'i Ocho Rios Jamaica amin'ity herinandro ity
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanambara fa sambo fitsangantsanganana roa no hiantso ny seranan'i Ocho Rios amin'ity herinandro ity. Ity fampandrosoana ity, izay nasongadin'ny Minisitra, dia porofo misimisy kokoa amin'ny fitomboan'ny fangatahana ny toerana haleha any Jamaika sy ny fahombiazan'ny ezaka hanokatra indray ny sehatry ny fizahantany.
MSC Meraviglia niverina tany amin'ny Port of Ocho Rios ny talata 21 septambra ho an'ny antso voalohany amin'ny dimy hatramin'ny Novambra.
Hijanona ao Jamaika ihany koa ny Carnival Sunrise amin'ny diany miverina amin'ny Alarobia 22 Septambra.
Tamin'ny fiverenan'ireo mpitsidika mpitsangatsangana nanomboka ny volana Jona 2020, nahita fitomboana tsy tapaka tao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany fitsangantsanganana i Jamaika.
"Ny MSC Meraviglia nahazo ny loka dia niverina tany amin'ny Port of Ocho Rios ny talata 21 septambra ho an'ny fiantsoana voalohany amin'ny dimy hatramin'ny Novambra. Na dia manana mpandeha 7,000 eo ho eo sy mpandeha aza izy io dia hiantsona miaraka amina olona 2,833 19 eo noho eo noho ny protokolon'ny COVID-XNUMX, "hoy ny fanazavan'ny minisitra Bartlett.
Ny MSC Meraviglia no sambo fitsangantsanganana farany niantsona ao Jamaika tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 rehefa namely ny valanaretina COVID-19, nanery ny fanidiana ny sisintanin'ny nosy.
Ny sambo iray hafa izay handeha ho any Jamaika, hiantsona ao Ocho Rios koa, dia ny karnavaly misandrata amin'ny fiverenany ny alarobia 22 septambra. Fiposahan'ny karnaval no sambo voalohany nitsidika ny nosy satria nisokatra indray i Jamaica tamin'ny fizahan-tany fitsangantsanganana tamin'ny alatsinainy 16 aogositra ary hiantsoana antso 11 hatramin'ny volana desambra.
"Ny sambo fitaterana an-dranomasina dia manandanja amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahan-tany, ary mahita fiverenan-tsambo an-tsitrapo izahay amin'ny fanekena fa ny Resilient Corridors ao Jamaika dia manome tontolo azo antoka ho an'ireo mpitsidika, mpiasan'ny fizahan-tany ary ny besinimaro," hoy ny minisitra Bartlett.
"Miaraka amin'ny fiverenan'ireo mpitsidika fitsangantsanganana an-tsokosoko nanomboka ny volana Jona 2020, dia nahita fitomboana hatrany hatrany amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID-19 izahay ary ankehitriny fa miverina eo an-toerana ny indostrian'ny fitaterana an-tsambo dia manantena ny firoboroboan'ny isantsika izahay," hoy ihany izy .
Nilaza Andriamatoa Bartlett fa vonona tsara i Jamaika amin'ny fiantsoana sambo fitsangantsanganana an-tsambo satria efa napetraka ny fepetra rehetra hihaonana amin'ny protokolan'ny COVID-19 an'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana ary ny eo an-toerana, ary voafetra ny fivezivezena ao anaty Residresent Corridors.
"Tsy maintsy asongadiko fa ny sambo fitsangantsanganana dia tsy maintsy mahafeno fepetra hentitra mifehy ny fanombohana ny fandefasana sambo fitaterana an-dranomasina, mitaky 95% ny mpandeha sy ny ekipa hatao vaksiny feno ary ho an'ny mpandeha rehetra hanome porofo ny valiny ratsy avy amin'ny fitsapana COVID-19 natao tao anatiny 72 ora ny sambo. Raha ny mpandeha mbola tsy voamarina, toy ny ankizy, dia adina ny fitsapana PCR, ary ny mpandeha rehetra koa dia zahana sy hizaha toetra (antigen) eo am-piandohana, ”hoy ny minisitra Bartlett nanamafy.
Miorina amin'ny fandaharam-potoana hatramin'izao, nilaza ny minisitra Bartlett fa mbola miandry fiantsoana sambo mpitsangatsangana 20 i Jamaika alohan'ny faran'ny taona.